यात्रामा महिलालाई शौचको समस्या ! | Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
चैत ९, २०७५ शनिबार ११:३७:५१ | भाेजेन्द्र बस्नेत
यात्रा बीपी राजमार्गको । सँगैको सिटमा थिइन् सोलुखुम्बुकी एक महिला । उनी स्थानीय राजनीतिसँगै सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्छिन् ।
म गाडी चढेको केही बेरदेखि नै उनी स्थानीय तहमा भ्रष्टचार मौलाएको बताइरहेकी थिइन् । म त्यो विषयमा छलफल गर्ने मुडमा थिइनँ । यात्रामा राजनीति, भ्रष्टाचार, अनियमितता जस्ता कुरा गर्दा मलाई यात्रा खल्लो लाग्छ । यात्रामा म सकेसम्म त्यस्ता विषयलाई बेवास्ता गर्छु ।
बिहान सात नबज्दै धुलिखेल पुगिसकेका थियौँ । जनप्रतिनिधिले डोजरे विकास गरेर भ्रष्टाचार गरेको, स्थानीय तह भ्रष्टाचारको अखडा बन्न थालेको जस्ता चर्चासँगै उनी चाउचाउ, कुरकुरे, दालमोठ जस्ता खानेकुरा चपाउँदै थिइन् । मलाई पनि खान कर गर्थिन् तर मैले बिहानै खान्न भनेँ ।
धुलिखेल अस्पताल कटेपछि मैले पानी पिएँ । उनलाई पनि दिएँ तर उनले पिउँदिन भनिन् । अनि भकुण्डेबेंशीमा खाजा खाएपछि गाडी अघि बढ्यो । पानी पिएँ, फेरि दिएँ नपिउने भनिन्, उनी ड्राई फूड खाइरहेकै थिइन् । मैलै यस्तो सुख्खा खानेकुरा खाएको छ पानी त पिउनु न भनें । तर उनले त आफूले अघिल्लो साँझदेखि नै पानी नपिएको बताइन्, अनि भनिन्– चिया पनि पिएको छैन, अघि खाजामा पनि चिया पिइनँ, अब बेलुका घर पुगेर मात्र चिया पिउने हो ।
मैले यात्रामा पानी पिउनु पर्छ नि भनेँ तर उनको जवाफले म छक्क परेँ । खासमा उनले गाडीमा पिसाब आउँछ भनेर पानी र पानीजन्य खानेकुरा नखाएकी रहिछन् । उनले भनिन्, ‘यात्रामा पिसाब लागेपछि निकै गाह्रो हुन्छ, त्यसैले हिजैदेखि सुख्खा खानेकुरा खाएर बसेकी छु । यो महिलाको साझा समस्या हो । यात्रा गर्ने महिलालाई सोध्नुस्, धेरैले पिसाबकै चिन्ता लाग्ने बताउँछन् ।’
सुन्दा हाँसो उठ्ने र सामान्य समस्या ठानिए पनि यो गम्भीर विषय थियो । दैनिक हजारौँ महिला गाडीमा यात्रा गरिरहेका हुन्छन् । उनीहरु धेरैलाई पिसाब फेर्नकै समस्या हुने र पिसाबको पिरले अघिल्लो दिनदेखि पानी नखाई बस्नु सामान्य समस्या भने होइन ।
हामीले दैनिक उमेर र तौल अनुसार चार-पाँच लिटरसम्म पानी पिउनुपर्ने डाक्टरहरु बताउँछन् । त्यो पनि पटक-पटक वा सम्भव भएसम्म हरेक घण्टा थोरै-थोरै गरेर पानी पिउन डाक्टरहरुको सुझाव छ । तर अघिल्लो रातदेखि नै पानी र पानीजन्य खानेकुरा नै छाड्न थालेपछि स्वास्थ्यमा समस्या आउने कुरा सामान्य हो ।
पानी नपिउँदा हुने समस्या एकातिर छ भने पिसाब आउँदा समयमा पिसाब नफेरेर हुने समस्या पनि उत्तिकै छ । मूत्ररोग विशेषज्ञ डाक्टर निर्मल लामिछाने दिसापिसाब समयमै गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ ।
लामिछानेका अनुसार, एउटा वयस्क मानिसको मूत्रथैलीमा दुई सय मिलिलिटर पिसाब पुगेपछि शौच गर्न मन हुन्छ । यो पिसाब बढेर तीन सय ५० मिलिलिटर पुगेपछि मानिसलाई पिसाबले निकै च्याप्छ । यति गर्दा पनि पिसाब फेर्न नपाएमा पिसाब थैलीबाट मिर्गौलातर्फ पिसाब फर्किन्छ ।
मिर्गौलाबाट दुई वटा नली हुँदै पिसाब बगेर पिसाब थैली भरिन्छ । समयमा पिसाब नफेरेमा फर्किएर पुनः मिर्गौलामा फर्किने हुँदा यसबाट मिर्गौलामा दबाब भई पिसाब छान्न समस्या हुने डाक्टर लामिछानेको भनाइ छ । लामो समयसम्म पिसाब नफेर्ने गरेमा दीर्घकालीन रुपमा मिर्गौलाको समस्या देखिन्छ ।
तर यात्रामा भेटिएकी समाजमा सक्रिय एक महिलाको कुराले मेरो मन छोयो । मैलै भनेँ, ‘खाजा-खाना खान रोकेको ठाउँमा शौचालय हुन्छ, अनि पिसाबले च्याप्यो भने बाटोमा पनि रोक्न लगाउँदा भैहाल्छ नि ।’
उनको जवाफ थियो, पुरुषलाई जत्तिको सजिलो महिलालाई छैन । होटल अगाडि रोक्दा त पिसाब फेर्न पाइन्छ, तर बाटोमा रोक्न लगाएर पिसाब फेर्न महिलालाई निकै असजिलो हुन्छ । पुरुषहरु बाटोको आसपासमै पिसाब फेर्न लाइन लागेको देखिन्छ, तर महिलाले त्यो आँट कम गर्छन् ।
उनले थप्दै गइन्, सार्वजनिक गाडी हो भन्नसाथ रोक्दैनन् पनि । अहिले विभिन्न स्थानीय तहले फोहोर हुने भएकोले सडकमा गाडी रोक्न पनि कडाइ गरेका छन् ।
रोकिहाल्दा पनि महिला मात्र निस्कने कुरा भएन, पुरुष पनि निस्किहाल्छन् अनि पिसाब फेर्न सँगै बस्न असजिलो भइहाल्छ । उनले हाँस्दै भनिन्, ‘पुरुषलाई जस्तो यसो छलिएर पिसाब फेर्न महिलालाई कहाँ सजिलो छ र ?’
उनले अघि गाउँमा भ्रष्टाचार बढ्यो भन्दै गरेको चिन्ता सबै बिर्सिइन् र यही पिसाबकै पिर सुनाउन थालिन् । मैले पानी दिँदै भनेँ ‘पानी चाहिँ पिउनुस्, पिसाब लाग्यो भने म गाडी रोक्न लगाउँछु । गाडीमा गुरुजीसहित ६ जना पुरुष र ४ जना महिला छौँ, पहिले महिलालाई मात्र बाहिर निस्कने व्यवस्था मिलाउँला ।’ उनले एक घुट्को पानी पिएर भनिन् ‘ तपाईँको कुरा त ठिकै हो, तर सँधै यसरी कहाँ हुन्छ र, धेरै पटक यात्रा गर्नुपर्छ म त पानी नै छाडिदिन्छु ।’
ती महिलाले सुनाएको कुरा उनको मात्र समस्या हैन । उनीजस्ता यात्रा गर्ने हजारौँ महिलाले यस्तै समस्या दैनिक रुपमा भोगिरहेका छन् । यो समस्या समाधानको बाटो खोजिनुपर्छ । अहिले स्थानीय सरकार गाउँघरको समस्या बुझ्न सजिलो ठाउँमा छ । उसले यस्ता विषयमा चासो राख्नुपर्छ । सडकमा गाडीको गतिलाई ध्यान दिएर हरेक डेढ-दुई घण्टामा भेटिने गरी सार्वजनिक शौचालय बनाइनु आवश्यक देखिन्छ ।
शुल्क लिएरै भए पनि शौचालय व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । बरु एउटा यात्रामा २०-३० रुपैयाँ तिर्नु, पिसाब रोक्नुभन्दा सजिलो हो । यो काम स्थानीय तहले नै गरेमा झनै सुनमा सुगन्ध हुन्छ । यो काम गर्न नसक्ने होइन र बेकामे काम पनि होइन । मानिसको जीवनसँग जोडिएको यस्तो काम स्थानीय तहले गर्नुपर्छ ।
अनि सार्वजनिक यातायात सञ्चालकहरुले पनि ठाउँठाउँमा पिसाब फेर्नको लागि गाडी रोक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । एक दिनको यात्रामा खाजा र चिया खाने ठाउँ बाहेक चार ठाउँमा मात्र गाडी रोक्यो भने पनि महिला बालबालिकाका लागि राहात पुग्छ । चार ठाउँमा पाँच मिनेटका दरले रोक्दा २० मिनेट ढिला हुन्छ । गन्तव्यमा २० मिनेट ढिला पुग्नु भन्दा धेरै गुणा बढी समस्या पिसाब रोक्दा हुन्छ, त्यसैले यो काम गर्नैपर्छ ।
दिनभरको यात्रामा उनले महिलाहरुलाई सार्वजनिक यातायातमा हुने अरु विभिन्न समस्यासँगै पिसाब फेर्ने र महिनावारी भएको बेलामा प्याड फेर्ने समस्या निकै जटिल रहेको बताइन् । यो कुरा आम महिलाको समस्या हो । मैंले भनेँ, ‘निकै संवेदनशील कुरा गर्नुभयो, यो कुरालाई सार्वजनिक छलफलको विषय बनाइनुपर्छ ।’
उनले भनिन्, ‘तपाईँले समाचार लेख्नुस् न ।’
मैले लेख्छु, भनेँ ।
केहीबेरमा उनले भनिन्, ‘मेरो नाम नलेख्नु नि ।’
म– किन ?
‘कस्तो पिसाब फेर्न नपाएकी भन्छन् ।’
मँ हाँसे मात्र ।
अन्तिम अपडेट: जेठ २४, २०७६
भाेजेन्द्र बस्नेत उज्यालाेमा कार्यरत हुनुहुन्छ।
March 27, 2019, 3:45 p.m.
यो एकदम जटिल समस्या हो / पश्चिमी देशहरुमा त हाइवेमा गाडी रोक्ने ठाउँ नै बनाएको हुन्छ , जहाँ पेट्रोल स्टेसन, चर्पी, चिया नास्ता खाने पसल पनि हुन्छ /नेपालमा पनि यस्तो सुबिधा ल्याउन सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ / महिला यात्रुले कति कष्ट भोग्नु परेको होला /
March 23, 2019, 5:20 p.m.
सामान्य लाग्ने तर अति महत्वपूर्ण विषय ।
नेविसंघका दुई गुटको विवाद रोक्न देउवाको सक्रियता
गाई, बाँदर र सिंहले पनि अब तमिल र संस्कृत बोल्ने
असोज ४, २०७५ बिहिबार
नेपाली डाक्टर र नर्सलाई रोजगारी दिने ओमानको प्रस्ताव
विश्वकपमा यी चार मध्येबाट हुन सक्छन् सर्वोत्कृष्ट खेलाडी !
हिमनदी पग्लने दर तीव्र गतिमा बढ्यो
हुम्ला जीप दुर्घटना : गोताखोरसहितको टोलीले पनि जीपमा सवार य...
बुद्ध एयरको सुर्खेत–काठमाण्डाै सन्ध्याकालीन उडान स्थगित
भारतसँगको हारपछि पाकिस्तानको आलोचना, पाकिस्तानी मिडियामाथि ...
मनसुनी गतिविधि बढ्यो, साँझपख पानी पर्ने सम्भावना
कोपा अमेरिका : पाराग्वेसँग बराबरीमा रोकियो अर्जेन्टिना
सुन प्रकरणका न्यायाधीशलाई कारवाहीका लागि सिफारिस
आगलागीमा आधा दर्जनभन्दा बढी ग्यास सिलिण्डर विस्फोट, तीन ओटा हो...
१५ मिनेटमा तीन गोल गरेपछि अर्जेन्टिना हारबाट जोगियो
लाेकसेवाकाे कर्मचारी भर्नासम्बन्धी विषयमा परेका सबै रिटमा एकै पटक सुनुवाइ हुने